कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च: सीमानाका खुकुलो, नाकाबाट आएकामा देखिँदै छ संक्रमण « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ प्रधानमन्त्री ओली रोल्पा नेकपा पक्राउ प्रचण्ड राशिफल नेपाली कांग्रेस विप्लव नेकपा
मगर संसार राहतकोषबाट ६४ औं सहयोग हस्तान्तरण
मगर संसार राहतकोषबाट ६३ औं सहयोग हस्तान्तरण
देशभर कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? [विवरणसहित]
एकै दिन थपिए ९०७० जना कोरोना संक्रमित, २७०७ जना निको भए
बैशाख १, काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गर्दा भारततर्फ जोडिएका सीमानाकाबाट आउनेहरूको विवरण राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने काममा बेवास्ता हुँदै आएको छ । जसका कारण कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।
हाल मुलुकका उत्तरी र दक्षिणीतर्फ गरी ३५ सीमानाका खुला छन् । तीमध्ये भारततर्फका मात्रै ३२ नाकाबाट सहज आवतजावत हुँदै आएको छ । यतिसम्म कि दैनिक रूपमा के कति संख्यामा ती विभिन्न नाकाबाट मानिस आवतजावत गरिरहेका छन् र उनीहरू कहाँ पुगे भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखाका प्रमुख परमानन्द घिमिरेले भारतसँग जोडिएका मात्रै ३२ सीमानाका हाल सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । ती विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई चेकजाँचपछि प्रवेश दिने गरिएको उनले बताए ।
सीमानाका हुँदै आउनेहरूको हेल्प डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हेल्प डेस्कमा जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा अधिकांश नेपाली परीक्षणबिना नै निर्बाध रूपमा नाकाबाट भित्रिने गरेका छन् । नाकाबाट भित्रिनेमध्ये केहीको मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
धनगढीबाट प्राप्त विवरणअनुसार ३ चैतयता मंगलबारसम्म भारतबाट आएका करिब २० हजार नेपालीमध्ये करिब ४ हजारको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ४ सय ७८ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको गति सामान्य हुँदै गएपछि गत ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सुरुमा १४ वटा नाका खुला गरेको थियो । पछि थप १६ नाका खुला गर्दै ३० वटा नाका खुला गरेको थियो । त्यसबाहेक दार्चुलाका झुलुंगे पुलबाट आवतवाजत गर्ने गरिएको केही नाकासमेत खुला अवस्थामा छन् ।
१० चैत २०७६ देखि सबै सीमानाका सिल गरिएकामा भारततर्फका १३ र चीनतर्फको एक नाका गत २६ साउन खुला गरिएको थियो । भारतर्फ संक्रमण बढ्दै गर्दा र सबै सीमानाका खुला हुँदा तथा आवतजावत गर्नेको तथ्यांक नराखिँदा फेरि पनि संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको हो ।
नेपाल प्रहरीले चैत महिनाको विवरण दिँदै प्रदेश १ मा १६ हजार ९ सय ६२ जना प्रवेश गरेको, लुम्बिनी प्रदेशमा ३० हजार ९ सय ९० जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४ हजार ५ सय २१ जना व्यक्ति विभिन्न नाका हुँदै नेपाल आएको जनाएको छ । तर, प्रदेश २ को विवरण भने प्रहरीले समेत पाएको छैन । प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरण अपुरो छ भने कुन नाकाबाट कति प्रवेश गरे भन्ने जानकारी प्रहरीले समेत यकिन गर्न सकेको छैन ।
हाल दैनिक रूपमा भारतमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदै आएको तथ्यांक देखाउँछ । यस्तै नेपालमा सोमबार मात्रै ५ सयभन्दा बढी संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यो संख्या केही अघि भने दैनिक १ सयभन्दा तल थियो ।
खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतबीच आवतजावत सामान्य अवस्थामा पुगेकोमा भारतमा संक्रमणको दोस्रो चरणको लहर बढ्दै गएपछि सीमानाकामा सावधानी अपनाउन निर्देशन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन गरिएको हो ।
‘सीमानाका भएर आउनेको अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्न, अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न भनिएको छ, अभिलेख राख्ने काम प्रहरीले गर्छ, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले भने ।
ती विभिन्न नाका हुँदै आएकामा स्वास्थ्य जाँचका क्रममा ज्वरो आएको पाइए क्वारेनटाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै पछिल्लोपटक को आए को गए भन्ने विवरण पनि राख्न भनिएको उनले जनाएका छन् । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।
१ बैशाख २०७८, बुधबार को दिन प्रकाशित
कोरोना खोप खरिदमा ३५ करोड कमिसनको खेलबारे मन्त्रीबाटै खुलासा
कुखुराको मासुको मूल्य एक सातामै तेस्रो पटक घट्यो
भारतमा झुठ्ठा मुद्दामा २४ बर्ष जेल बसेका रोल्पाका नरेन्द्र रोका छुटेर घर पुगे
दाङमा निषेधाज्ञा लागू, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ? [सूचनासहित]
दाङमा कारमा मृत भेटिएका तीन बालकको श’व पहिचान, दुईजना पक्राउ
दाङमा पार्किङ गरि राखेको कार भित्र ३ वटा श’व फेला